အစွဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » အစွဲ	19
Posted by တောတွင်းပျော် on May 5, 2016 in Creative Writing | 19 comments
တိုက်ခဲ့့ဖူးတဲ့ခလုတ်လေးတစ်ခု
မနက်စောစော လေထန်ကျောင်းဆရာတော်ဆီက ဖုန်းဝင်လာတယ်။
“ တောတွင်းပျော်၊ မင်းအားရင် ငါ့ ကားကို မောင်းပေးအုံး၊ တဖက်ရွာက လူမမာကို ဆေးရုံပို့ မလို့ ”
ဆရာတော်ကျောင်းမှာ ကျောင်းသားကပ္ပိယမရှိ။ ကားမောင်းတတ်တဲ့ဦးဇင်းတွေရှိပေမယ့်ဝိနည်းနဲ့ 
မတော်လို့ခုလို အရေးအကြောင်းရှိရင် တောတွင်းပျော်ကို ခေါ်နေကျ။
လူမမာရဲ့အခြေအနေ ဘယ်လိုရှိသလဲ ဘုရား ပြန်မေးတော့ 
“ သိပ်ဟန်ပုံ မရဘူး”
ဒါနဲ့တောတွင်းပျော် ဆရာတော်ကျောင်းကို သွားပြီး ကားကို လိုအပ်တာတွေ စစ်ဆေးလုပ်နေလိုက်တယ်။
သွားရမယ့်ခရီးကလည်း ဝေးတာကိုး။ ကား စစ်ဆေးလုပ်နေချိန်မှာပဲ ဆရာတော် တောတွင်းပျော်ဆီ
“ ခုလေးတင်ပဲ ဖုန်းထပ်ဝင်လာတယ်။ လူနာ ဆုံးသွားပြီတဲ့ ”
မမြင်ဖူးပေမယ့်အသက်ဆုံးသွားတဲ့လူနာအတွက် စိတ်ထဲကတော့မကောင်း။
အိမ်ပြန်ရောက်တော့အမေ့ ကို ဒီအကြောင်း ပြန်ပြောမိတယ်။ အမေက ခု ဆုံးသွားတဲ့လူနာကို သိနေတယ်။
ဒီလူနာ ဟိုအရင်က စပ်ဆေးတွေ တော်တော်စားတယ်ဆိုလားပဲ။
ဘာဆေးတွေလည်း တောတွင်းပျော်မသိပေမယ့်ဒီဆေးစားရင် အစားအသောက် စားလို့ ကောင်းပြီး
လူလည်းဝသတဲ့ ။ နောက်ပြီး အလုပ်ကို မပင်မပန်း တော်တော်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတယ်။
စိတ်ထင်တော့မူးယစ်ဆေးတစ်ခုခုနဲ့ များစပ်ထားသလား မသိ။
တောတွင်းပျော်တို့ ဖက်မှာ အမျိုးသမီးကြီးတစ်ချို့ က ဝ မှ ကျန်းမာတယ်ဆိုတဲ့အယူအဆမှားတစ်ခုကို
လက်ခံနေခဲ့ ကြတာ။ ဒါကြောင့်ဟိုတုန်းက အမျိုးသမီးကြီးတွေ တော်တော်များများ ဒီစပ်ဆေးကို စားခဲ့ ကြတယ်။
ခုနောက်ပိုင်း ဒီဆေးတွေသုံးတာ မကြားမိတော့ ဘူး။ ဗဟုသုတတွေ ရကုန်လို့ ဖြစ်လိမ့် မယ်။ ဒါပေမယ့် 
အရင်က စွဲစွဲမြဲမြဲသုံးခဲ့ သူတစ်ချို့( ခုလိုဆုံးပါးသွားတဲ့ ) မှာတော့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကို ခံစားနေကြရတယ်။
နောက်ပိုင်း ကိုယ်လက်မအီမသာတွေဖြစ်ကြတော့မြို့ ပေါ်က တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ဆရာဝန်တွေဆီ မပြဘဲ
နီးစပ်ရာ ရွာထဲက ဆေးဆရာတွေဆီ ပြေးကြတော့ တယ်။
ဒီဆရာတွေက ဟိုခေတ် တောတွင်းပျော်တို့ ဒေသ နယ်မြေမငြိမ်းချမ်းခင်အချိန်က မြို့ ပေါ်က ဆရာဝန်တွေ၊
သူနာပြုတွေ မရောက်လာနိုင်ခင် ဒေသစောင့် ရှောက်နိုင်ဖို့ဆေးဝါးသင်တန်းတွေ၊ ရှေးဦးသူနာပြုသင်တန်းတွေ
သူတို့ ခေတ် သူတို့ အခါက သူတို့ ဆီ ကုသမှုခံယူခဲ့ တဲ့လူနာတွေက (ခုလို ဆုံးပါးခဲ့ သူတွေ)က
သူတို့ ဆရာမှ သူတို့ဆရာ ဖြစ်နေကြတော့ တယ်။ ဆရာဝန်ကြီး ပါရဂူကြီးတွေဆီမှာ ပြရမယ့် အဆင့် တွေ
မှာတောင်မှ သူတို့အစွဲက ဒီဆရာတွေမှာ ရှိနေတုန်း။ နောက်ဆုံး ဒီကဆရာတွေ လက်မနိုင်တဲ့အဆင့် 
မြို့ ပေါ်တင်မယ့် အဆင့် ဆို ရောဂါက တော်တော်ကျွမ်းတဲ့အဆင့် ရောက်နေပြီ။ ကုသလို့ရနိုင်သေးတောင်
အချိန်ယူကုသရမယ့်အဆင့် ရောက်နေပြီ။
ဒီလို အစွဲကြီးတဲ့အဖြစ်က ၅၀ကျော် ၆၀ကျော်သက်တန်း လူကြီးတွေမှာ ခုချိန်ထိ ရှိနေကြတုန်း။
တလောလေးက တောတွင်းပျော်တို့ ရွာနဲ့ရွာချင်းစပ်ရွာက လူနာတစ်ယောက် ကိုယ်တွေ ဖောယောင်ပြီး
ဒီသတင်းကြားတော့လေထန်ကျောင်းဆရာတော်က တောတွင်းပျော်ကို ကားမောင်းပို့ ဖို့အသင့် ပြင်ထားခိုင်းတယ်။ ခက်တာက ဒီလူနာက သူ့ ကို ကုပေးနေတဲ့ဆရာပါလိုက်မှ ဆေးရုံတက်မယ်
ဆိုပြီးတင်းခံနေတယ်။ သူ့ ဆရာသမားဆီက တုံ့ ပြန်တဲ့အရိပ်အယောင် ဘာမှမရ။
ဒီ စိတ်မချမ်းသာစရာ အဖြစ်မမြင်နိုင်တဲ့လေထန်ကျောင်းဆရာတော်က အဲဒီရွာက ရွာသားတွေ
လေးစားရတဲ့ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ကို ဖုန်းဆက်ပြီး လူနာကို ဆေးရုံတက်ဖို့တွန်းအားပေးခိုင်းတာ
“ ငါပြောတာလည်း နားမဝင်ဘူး။ သူ့ ဆရာမှ သူ့ ဆရာဖြစ်နေတာ” တဲ့ ။
နောက် ၂ ရက်အကြာမှာ ဒီလူနာ ဆုံးပါးသွားတယ်။
သားသမီးတွေ အတန်းပညာမြို့ ကျောင်းတွေမှာတက် အတွေးအမြင်တွေ ပြောင်းလဲနေကြပြီ။
တချို့ ဆို ဘွဲ့ ရ ပညာတတ်တွေဖြစ်ပြီး အစိုးဝန်ထမ်းတွေတောင် ဖြစ်နေကြပြီ။ ဒါပေမယ့်မိဘတွေရဲ့ 
ရှေးရိုးစွဲ တွေကို နားမချနိုင်ကြသေး။ အသက်ဆုံးပါးတဲ့အချိန်ထိတောင် သူတို့ အစွဲတွေ ခေါင်းမာမာနဲ့ 
ဖက်တွယ်နေသေးတဲ့လူကြီးတွေရှိနေကြတုန်း။
မကြာသေးခင်ကပဲ ရွာက အသက် ၈၀ နီးပါးရှိတဲ့လူကြီးတစ်ယောက်ကို ပုဂ္ဂလိကဆေးခန်းတစ်ခု ပို့ လိုက်ရသေးတယ်။
သူကတော့သန်သန်မာမာကြီးပါ။ မဖြစ်မနေ ခွဲစိပ်မှုတစ်ခုလုပ်ရမှာမို့ဆေးရုံတင်ရတာပါ။ ဆေးခန်းမှာ
ခွဲစိပ်ပြီး အနာကျက်စိတ်ချရတဲ့ အထိ ၇ ရက်လောက်နေခိုင်းတာ အိမ်ပြန်မယ်ချည်း တဂျီဂျီဖြစ်နေလို့ 
၃ ရက်လောက်နဲ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်လာတယ်။ ဆေးခန်းက တစ်ပတ်ပြည့် ရင် မဖြစ်မနေပြန်ပြဖို့မှာလိုက်တာကို သူက ရွာပြန်ရောက်ရောက်ချင်း သူ့ ဆရာသမားကို ပင့် လိုက်တော့ တာပဲ။
သူ့ ကျန်းမာရေးအတွက် စိတ်ပူနေတဲ့သားသမီးတွေ မြေးတွေ အကုန်လုံး တဗြစ်တောက်တောက်
ရွာက ဆရာကလည်း သူ့ နယ်ပယ် သူ၊ သူ့ အင်ပါယာနဲ့သူ့သြဇာကလည်း ကြီးပါ့ ။ သူကုနေကျ
လူနာတွေ တခြားမှာ သွားမကုရဲ။ သွားကုမိလို့သူ့ အပြောခံရလို့ ကတော့သူ့ ဖောက်သည်ဟောင်း
လူနာတွေက တော်တော်ကြောက်နေကြရှာတာ။ သူ့ ဖောက်သည်တွေက သူ့ ခေတ် သူ့ အခါက
လူနာတွေချည်း။ နောက်ပေါက် လူနာတွေကတော့သူ့ ဆီကို မသွားကြပါ။
သူ့ ဖောက်သည်ဟောင်း လူနာတွေကလည်း ကုတာချင်းအတူတူ သူတို့ ဆရာကုတာမှ ပိုကောင်းတယ် ဆိုပဲ။
သြော် … အစွဲတွေ။
Yae Myae Tha Ninn says: အစွဲဆိုမှ စပ်ရင်တော်တဲ့ အစ်မတယောက် သတိရမိတယ်… ခြေထောက်မှာ အဖုဖြစ်တော့ စမ်းတာ ကင်ဆာဆိုပြီး သိရတယ်… ခွဲမှရမှာကို ပေပြီး ကျွန်တော်တို့ မြိတ်ကပဲ ကန်းဇော်ဆီကို ခြေထောက်ထဲ ထိုးတယ် ခင်ဗျာ… အိမ်မှာနေပြီးကုတာဆိုတော့ မြင်နေရတာပေါ့ဗျာ… လာကုတဲ့ ဆရာက ပြောမကောင်းပါဘူး လေးစားချင်စရာ ရုပ်၊ ဟိတ်ဟန် ရှိပါဘူး… စိတ်ထဲလဲ $ပိုတွေ ပိုက်ဆံလိမ်ယူတယ်လို့ပဲ ထင်နေတယ်… တကယ်လဲ ဟုတ်တယ်… ၃လလောက်ကုပြီး မြိတ်ပြန်တယ်… ပြီးတော့ ပြန်လာတယ်… နောက်ဆုံးခွဲရတာပဲ… ဒါပေမဲ့ လွန်သွားပြီလေ… ခြေတဖက်လဲ ဆုံးသွားတယ်… ပြီးတော့ မကြာဘူး.. ရှောပါ ရှောသွားတယ်…. ကန်းဇော်ဆီကို နတ်ဆေးဆိုပြီး ယုံတာလေ… ဒါလဲ အစွဲတခုပဲဗျ…
တောတွင်းပျော် says: ဒါတွေကို မြင်ရတော့ကိုယ့် မှာ
မချင့် မရဲနဲ့ 
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် says: ကျော်လဲ ဘီအီးစွဲနေဒါ ဘိုလုပ်ရပါ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 390
တောတွင်းပျော် says: ကျနော်ရွာက ဆရာဆီ လာဖြတ်လေ..
kai says: ပညာရေးပေါ့….
လူတိုင်းမသင်မနေရ.. အလယ်တန်းလောက်အထိတော့ လုပ်ရမယ်…လို့..။
ဒါမှမဟုတ်လို့ကတော့… အသက်တွေအသက်တွေဆိုတာ… တဖြုတ်ဖြုတ်…။
တိုင်းပြည်ကုန်ထုတ်နိုင်စွမ်းလျှော့ပါတယ်..။ တိုင်းပြည်နာပါတယ်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 390
တောတွင်းပျော် says: သူတို့ခေတ်တုန်းက တိုက်ပွဲတွေနဲ့မငြိမ်ခဲ့ တော့ 
စာရေးတတ် ဖတ်တတ်သူတွေ မရှိသလောက်ပဲ။
နည်းနည်းရေးတတ် ဖတ်တတ်တဲ့ သူတွေက ဘုန်းကြီးကျောင်း နေခဲ့ တဲ့သူတွေ
uncle gyi says: မျက်စိပိတ်နားပိတ်
တောတွင်းပျော် says: စိတ်မကောင်းစရာတွေပေါ့ 
ခင်ဇော် says: အစွဲ က အစလုပ်ဖို့ သာ လွယ်တာာာ
တောတွင်းပျော် says: အမရေ
ဒီအစွဲက ပညာမသင်ခဲ့ ရတဲ့အကျိုးဆက်တွေကြောင့် ပေါ့ ။
မိဘတွေ ကိုယ်တိုင်က သူတို့ လို ပညာမဲ့ မဖြစ်ရအောင်
သားသမီးတွေကို တွန်းပို့ ခဲ့ ကြပေမယ့် 
သူတို့ ကိုယ်တိုင်ကျတော့မရုန်းထွက်နိုင်ကြဘူး။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: အစွဲတွေအတွက် စိတ်မကောင်း။ သို့သော် တောမျောက်ကြီး ပရဟိတ လုပ်နေတာသိရတော့ ၀မ်းသာပါသည်။
တောတွင်းပျော် says: ကိုယ် တတ်နိုင်လောက်ပေါ့အမ။
မျက်နှာလွှဲ ခဲပစ်လည်း မလုပ်နိုင်
မနေသာလို့ဝင်ပါပြန်တော့ လည်း အရာမထင်။
တခါတလေ အားမလိုအားမရစိတ်နဲ့ 
Thint Aye Yeik says: အစွဲတွေကို အဆဲ နဲ့ ဖြတ်ပစ်ရင် ဘယ်လိုနေမလဲ…
ဒါနဲ့…. ဘုန်းကြီးတွေ ကားမောင်းရင် ဝိနည်းနဲ့ ညီ မညီ ဆိုတာ… ဂေါတမဗုဒ္ဓကြီး ဘယ်လိုများ မှတ်ချက်ထားခဲ့လဲဆိုတာ.. သေချာ သိချင်မိ….
kai says: ဗုဒ္ဓက သူ့တရားတွေ.. များများမြန်မြန်ဖြန့်နိုင်ဖို့.. သံဃာဂိုဏ်းထောင်ခဲ့တာဖြစ်လေတော့… ဒီလိုခေတ်မှာ.. ကားစီးပြီးသွားမှခရီးတွင်မှာမို့.. စီးစေသတည်းပေါ့….။
၀ိနည်းနဲ့လည်း.. ညီစေသတည်းပေါ့…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 390
တောတွင်းပျော် says: ခေတ်ခါ အလိုက် ပြောင်းလဲ ဖြေလျော့ လို့ ရတဲ့ဝိနည်းတွေရှိတယ်လို့ ကြားဖူးတယ်။
ဒီလိုဖြစ်နိုင်ရင် ရဟန်း သာမဏေတွေ ဆွမ်းခံချိန် ဖိနပ်စီးဖို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲစေချင်တယ်။
ခေတ်က လွန်ခဲ့ တဲ့၂၅၀၀ကျော်ကနဲ့ တော့ မတူတော့ ။
ကတ္တရာလမ်းမ ကွန်ကရစ်ပလက်ဖောင်း အပူတွေ
တနေ့ က ထိုင်းချယ်နယ်တစ်ခုမှာ ဘုန်းကြီးဆွမ်းခံတာ ဖိနပ်စီးတာတွေ့ မိလို့ 
တောတွင်းပျော် says: ဆဲစေသတည်း။
ဘယ်လိုကြောင့်မညီတယ် ကျနော်လည်း မသိဘူး။
ပိုစ်တွေတင်ပြီး ဗဟုသုတအနေနဲ့ပြောပြရှင်းပြစေချင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ က အသက်ကြီးလေ ဒုံးဝေးလေ ဖြစ်နေပလား။
T.A.Y အနေနဲ့ လည်း ရဟန်းဝတ် သင်္ကန်းစည်းပြီး
အတွင်းကျကျ လေ့ လာဆည်းပူးပြီး ပြန်လည် ပို့ ချ ရှင်းလင်း စေလိုပါတယ်။
Thint Aye Yeik says: ဘုန်းကြီးတော့… မလုပ်ပါရစေနဲ့အုန်း…
မိန်းမကို ကလေးတွေ တန်းစီမွေးခိုင်းပြီး.. အိမ်ထောင်ရှင်ကြီး လုပ်အုန်းမှာ ။
ကိုယ့်မိဘကို စိတ်တိုင်းမကျခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေ ကိုယ့်သားသမီးတွေကို မဖြစ်စေရအောင်.. လုပ်ခဲ့ပြီးမှ သေမှာ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေ အစွဲအရမ်းထားကြတယ်လေ။
တောတွင်းပျော် says: မှန်ကန်တဲ့ အစွဲဆိုရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ လေ။